Ahoana ny famerenanao ny rindran'asa otrikaretina amin'ny alàlan'ny isa avo kokoa - Ampio ny tebokao
Famerenam-bokatra momba ny cannabis
Famerenam-bokatra amin'ny alàlan'ny Cannabis amin'ny lozisialy
Antso hiantsoana alohan'ny famerenana?
Ahoana ny fomba hamerenana ny rindranasa cannabis amin'ny boost Score
Ny famerenana fampiharana ny rongony dia tokony hiompana amin'ny maha-feno sy matanjaka ary mihoatra ny fatra takian'ny lalàna hahazoana fahazoan-dàlana rongony ao amin'ny fanjakanao. Hampiasa ny rindranasa any Illinois hojerena izahay satria ao anatiny rongony avokoa ny zava-drehetra eto ambanin'ny masoandro, ao anatin'izany ny fitoviana ara-tsosialy. Ny fizotry ny fandinihana ny fangatahana alohan'ny fandefasana azy dia mitaky maso amin'ny antsipirihany sy ny fanarahan-dalàna, koa manana mpisolovava rongony, na mpanolo-tsaina rongony manana fahazoan-dalàna, hamerina hijery ny fangatahana fahazoan-dàlan'ny ekipanao.
FIVAVAHANA MISY: Ahoana ny fomba hamolavolana hetsika cannabis
FIVAVAHANA MISY: Fampiharana lesoka momba ny asa tanana
Famerenam-bokatra momba ny fitrandrahana cannabis amin'ny famoahana sary
Amin'ny Mey 2020 io, izay midika fa ny sitrapon'i Illinois tsy ho ela fanomezana 75 fahazoan-dàlana dispensary XNUMX cannabis ho an'ireo mpangataka mendrika sy mahay. Mandritra izany fotoana izany maro fahatarana nandalo fe-potoana fotsiny izahay mpanamboatra asa tanana, fangatahana infuser ary rindranasa transporter. Nirehareha tamin'ny manaiky ekipa marobe tena mahafeno fepetra ary manantena izahay rehetra amin'izy ireo. Izany rehetra izany dia midika fa misy mpangataka an'arivony miandry ny hahafantatra ny valin'ny fanontaniana tsotra iray: ahoana no nataoko
Mampalahelo fa ankoatra ireo mpandresy 75 tsara tarehy dia hisy an-jatony, apetraka ara-bakiteny an'arivony no diso fanantenana izay tsy mahazo ny iray amin'ireo fahazoan-dàlana ara-dalàna ao amin'ny Illinois. Any amin'ny fanjakana hafa, ny tsy fahampian'ny mangarahara namorona indostrian'ny trano kely ho an'ireo mpisolovava nanenjika ireo mpangataka tolotra sy ny mpamatsy vola. Raha an'ny governemanta Illinois dia a sasany laza ho an'ny mampiahiahy fitondran-tena, ny zava-misy tsotra dia hoe miatrika lozisialy vaovao fahazoan-dàlana vaovao isika amin'ny indostrian'ny orinasa vaovao, ka tsy fantatra ny maro.
Miatrika ny fanjakanao dia mety ho be ny fahafinaretana, saingy tena fifanarahana be ihany koa. Lafo be ny fanondranana zavatra, toa ny fanohanana ara-bola asa fivarotan-tena. Noho izany dia namorona ity toro-lalana mahasoa ity izahay mba hanampiana anao hanombatanao ny rindranasa famelana cannabis ny tenanao, miorina amin'ny rindranasa noforonin'ny departemanta ara-bola sy matihanina ara-teknikan'i Illinois (IDFPR).
izany Famerenam-bokatra momba ny cannabis Ny torolàlana dia natao ho an'ny olona izay mieritreritra ny fangatahana fahazoan-dàlana dispensia, na izay efa eo anelanelan'ny fangatahana, na ireo izay efa nampihatra sy very aza, ary mieritreritra ny hanaitra izany fanapahan-kevitra izany amin'ny Fanjakana.
FAMPIANARANA ARA-DALANA ILLINOIS
The Saham-bokatra an'ny IDFPR dia cannabis fampiharana amin'ny fomba manaraka:
Sarotra amin'ny drafi-piofanana momba ny mpiasa (15 isa)
Ny fitandroana ny filaminana sy ny firaketana (65 isa)
Drafitrasa momba ny asa, ara-bola, drafi-piasana ary drafitra gorodona (65 isa)
Fahalalana sy fanandramana amin'ny tanam-bary sy fiompiana mifandraika (30 isa)
Toerana amin'ny maha-mpampiasa ara-tsosialy (50 isa)
Ny fangatahana asa sy asa (5 isa)
Drafitra tontolo iainana (5 isa)
Illinois tompony (5 isa)
Sata ho Veteran (5 isa)
Diversity Plan (5 isa)
Total: 250 isa
Ireo teboka ireo dia omena ampita roa-polo amby fampirantiana. Ny feno lisitra ny fampirantiana dia misy:
Kopiary momba ny haba tsy azo averina
Formulir Application Application Office (s)
Fanekem-piaraha-miasa ao amin'ny orinasa, amin'ny lalànan'ny lalàna, na lahatsoratra momba ny fampidirana sy ny latabatra fandaminana, fananana sy fifehezana
Fiofanana momba ny fanabeazana sy fanabeazana momba ny fanabeazana
Drafitra fanabeazana ho an'ny mpividy
Fahatsiarovana, Quarantine ary Drafitra Fandringanana
Drafitra fanaraha-maso sy drafi-panoratana an-tsoratra
Drafitra fanoratana arina
Drafitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonina
Fahalalana tsy fantatra anarana sy fanandramana mpiandraikitra tompon'andraikitra
Porofon'ny sata ho mpampihatra ny fiantohana ara-tsosialy, raha toa ka mpangataka fitoviana ara-tsosialy
Drafitr'asa momba ny asa sy asa
Drafitra momba ny tontolo iainana (tsy azo atao)
Porofon'ny sata amin'ny maha-tompon'ny Illinois azy (tsy azo atao)
Ny porofon'ny sata ho Veteran (tsy voatery)
Araka ny hitanao dia misy fahasarotana ny sasany amin'ireto fampirantiana ireto, fa ny hafa kosa miorim-paka. Amin'ny fihodinana QA voalohany, ny IDFPR niaiky fa ny rafitra hevitra sy ny fampirantiana dia tsy tena mifanandrify, saingy nilaza tamim-pahamarinana ireo mpangataka mba handeha amin'ny rafi-pandrefesana ao amin'ny lalàna mifehy ny hetra sy ny hetra (CRTA). Noho izany, notapahanay io torolàlana io miankina amin'ny fitsipiky ny scoring.
Ny drafitra dia misy ny drafi-panofanana mpiasa izay mampiseho fa ny mpiasa dia hahatakatra ny lalàna sy ny lalàna izay arahin'ireo mpiasa dispensia, manana fahalalana momba ny fepetra fiarovana sy ny fizotran'ny fandaharam-potoana, ary afaka manome torohevitra amin'ny mpividy momba ny fomba handoavany soa aman-tsara ny cannabis Ampiasao ireo vokatra manokana atolotry ny dispensary. [410 ILCS 705/15-30(c)(1)]
Hevitra fototra: Asehoy D
Ny mpangataka dia tokony hanana drafitra fanofanana mpiasa feno sy feno izay mandrakotra ireo faritra voalaza ao amin'ny CRTA. Betsaka ny mpangataka no alaim-panahy hameno ny Exhibit D amin'ny filazalazana manjavozavo, ohatra: "hampiofana ny mpiasantsika amin'ny fanarahana ny lalàna izahay" na "ny mpiasa dia hozarina amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa." Na izany aza, araka ny famaritan'ny IDFPR ny endrika fangatahana azy dia tokony “manome plan izay mamaritra ny fiofanana sy ny fanabeazana homena ny mpilatsaka an-tanana ny fandaminana. ” Midika izany fa mila zavatra akaiky kokoa amin'ny fandaharam-pianarana feno ianao, nomena ny fetra 15 pejy ao amin'ny Exhibit D. Ireto misy lafin-javatra sasany mba hijery:
Hahazo izany ve ny mpiasanao? Fiofanana Vendor tompon'andraikitra?
Hahazo fiofanana momba ny fiainana manokana ve ny mpiasanao?
Ahoana ny momba ny fiofanana sy ny protocole?
Moa ve mandray ny fiofanana momba ny fanenjehana ara-nofo mandritra ny adiny 1 ny mpiasa?
Mitana rakitsoratra mandritra ny 8 ora ve ianao?
Misedra traikefa sy / na fanabeazana ve ny mpiasa ao aminao?
Ho fanampin'ny fanofanana Vendor Responsible, hanome ny fanavaozana farafahakeliny valo (8) farafahakeliny ve ianao?
Hanohy fampiofanana na fanamarinana avy amin'ny antoko hafa ve ianao (Green Cultured, Hempstaff, sns?)
Security and Recordkeeping (teboka 65)
Ny drafitry ny fiarovana dia misahana ny fisorohana ny halatra na fanararaotana ny cannabis. Ny drafitra fiarovana dia mampiseho ny fomba fiarovana ho an'ny mpandraharaha sy ny mpividy, ary ny fanaterana azo antoka sy fitehirizana ny cannabis sy vola. Maneho ny fankatoavana ireo fepetra takian'ny fiarovana amin'ity lalàna ity ary misy ny fitsipika. [410 ILCS 705/15-30(c)(2)(A)]
Drafitra fitahirizana rakitra, fanaraha-maso ary fanaraha-maso ny lisitra, fifehezana kalitao ary politika sy fomba fiasa hafa izay hampiroborobo ny fitanana an-tsoratra mahazatra sy hanakiviana hetsika tsy ara-dalàna. Ity drafitra ity dia misy ny paikadin'ny mpangataka hifandraisana amin'ny Departemanta sy ny Departemantam-panjakana misahana ny fanapotehana sy famoahana rongony. Ny drafitra dia tsy maintsy aseho ihany koa ny fanarahana ity lalàna sy lalàna ity. [410 ILCS 705/15-30(c)(2)(B)]
Ny drafitry ny fiarovana dia tokony hahitana antsipirihany izay fifanekena manokana amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny fizarana 10-5 ao amin'ny Detective privé, alarmement privé, Security manokana, Fingerprint Vendor, ary Locksmith Act of 2004 dia hifanarahana ny foto-kevitra mba hanomezana fiarovana ampy azy ireo. [410 ILCS 705/15-30(c)(2)(C)]
Hevitra fototra: Fampirantiana H, Aseho I
Ity fizarana ity dia mifamatotra ho an'ny ankamaroan'ireo teboka eo amin'ireo fepetra fanamarinana samihafa, ka araho tsara kokoa izany. Ny fiarovana dia azo antoka fa ny ahiahy lehibe indrindra ho an'ny Ivotoerana General Illinois amin'ny fanaovana ny CRTA ho lasa lalàna, ary ho an'ny antony tsara. Nanoratra betsaka momba izany izahay fiarovana cannabis, saingy miverimberina: raiso fatratra ny fiarovana.
Afaka manana pejy 50 ao amin'ny Exhibit H ianao, koa ampiasao izy ireo! Amin'ny lafiny iray, pejy 15 fotsiny ny Exhibit I, ka alao antoka fa tsy handeha. Ireto misy olana lehibe hodinihina amin'ny fanombanana ny fiarovana sy ny firaketana an-tsoratra anao:
Efa nanaovan'ny polisy fanjakana ny drafitry ny fiarovana anao (tsy takiana fa hevitra tsara)?
Hanao mpiambina ve ny fitaovana sahaninao mandritra ny ora fiasana, na 24/7?
Moa ve ny fitaovam-piarovana anananao mifanaraka amin'ny teboka 15-100 amin'ilay lalàna?
Misy fiofanana azo antoka ve ny mpiasanao?
Misy mpikirakira fitaratra vaovaonao ve?
Voafetra tsara ve ny mpiambina anao?
Hijanona ve ny rafitra fiarovana anao mandritra ny fahatapahan'ny herinaratra? Adiny efatra farafahakeliny?
Moa ve ny takelakao dia mahafeno ny fepetra takian'ny DEA amin'ny fandaharam-potoana mifehy ny fandaharam-potoana?
Ianao ve dia manao drafitra sy fampihavanana isan'andro?
Moa ve ianao hanangana kaonty miaraka amin'ny rafi-panamarihan'ny Fanjakana alohan'ny hisokafana?
Ianao ve mihazona firaketana tsy misy vidiny amin'ny alàlan'ny rafitra POS?
Inona avy ireo sombin-tany ao amin'ny rafitra fitazonana data anao?
Moa ve ireo rakitsoratra ilaina raikitra tavela eny an-toerana mba hijerena ny fanjakana?
Ny drafitry ny orinasa dia mamaritra, farafaharatsiny, ny fomba hitantanana ny fandaminana maharitra amin'ny fotoana maharitra. Anisan'izany ny famaritana ny rafitry ny fivarotana, ny fividianana ary ny fandavana ny varotra, ny tsiambaratelo ary ny vokatra sy serivisy hatolotra. Hampiseho ny fanajana an'ity lalàna ity sy ny fitsipika. [410 ILCS 705/15-30(c)(3)(A)]
Ny drafitra fampandehanana dia tokony hampiditra, farafaharatsiny, fanao tsara indrindra ho an'ny fandaharam-potoana mandritra ny andro sy ny mpiasa. Ny drafitra fandidiana dia mety misy koa fampahalalana momba ny fomba fiasa, anisan'izany ny fampahalalana momba ny isan-jaton'ny mpiasa manontolo andro izay homena karama. [410 ILCS 705/15-30(c)(3)(B)]
Ny drafitra fanolorana natolotra dia mety ho an'ny fidirana am-pahibemaso, ny làlan-tsambo dia manentana ny famelomana ny cannabis, mifanaraka amin'ny Amerikana manana fahasembanana ary ny lalàna momba ny tontolo iainana, ary manamora ny fitantanana sy ny fitahirizana vokatra azo antoka. [410 ILCS 705/15-30(c)(3)(C)]
Hevitra fototra: Fampiratiana F, Fampiratiana J, Fampiratiana K, Fampirantiana O
Ity fizarana ity dia mendrika iray ihany koa 65 hevitra, ary manatrika fampiratiana efatra. Ny lohahevitra midadasika manerana an'ireo fampirantiana ireo dia maniry ny IDFPR anao hampiseho azy ireo fa manana ny raharaham-barotra ianao mba hampandehanana ny fotoam-pivoriana iray, ary hanome ny fanjakana ny fahatokisan-ketra azo itokisana. Ireto misy resaka vitsivitsy tokony hodinihina:
Lazalazao ny rafitra POS anao
Manana drafitra hanaraha-maso ny fandavana ny varotra ve ianao?
Ahoana no fomba hihazonana ny tsiambaratelo amin'ny mpividy?
Inona no vokatra sy serivisy atolotrao?
Ohatrinona ny rongony voatahiry ao amin'ilay trano?
Ity fizarana ity dia ampitahaina amin'ny ankamaroan'ny fampirantiana hafa. Ny IDFPR dia manolotra lisitr'ireo entana sivifolo (19) izay tokony hasehon'ny drafitra gorodona farafaharatsiny. Ny lisitra feno dia Eto, ary tokony hodinihina feno. Ankoatr'izay, diniho ireto olana manaraka ireto:
Inona avy ireo fitaovana manokana fiarovana hampiasainao? Efa tafakatra amin'ny sps efa nomena ao amin'ny CRTA ve izy ireo?
Manaiky ny lalàna ataon'ireo Amerikana manana fahasembanana (ADA) ve ianao?
Manaraka ny lalàna mifehy ny tontolo iainana ve ianao?
Ahoana ny fomba fanamboarana ny fitaovanao sy ny fitahirizana vokatra?
Hisy fiantraikany amin'ny vondron'olona akaiky anao ve ny fitaovanao? Efa niresaka tamin'ny vondron'ny vondrom-piarahamonina, mpifanila trano ary ny governemanta eo an-toerana ve ianao?
Moa ve ny lalànan'ny fiarovana anao dia mifanaraka amin'ny fenitry ny takian'ny DEA amin'ny fandaharam-potoana mifehy ny jadona?
Misy faritra fidirana voafetra arak'izay voalaza ao amin'ny Fizarana 15-25 (d) (11) (B) an'ny CRTA?
Manana drafitra amin'ny fitaovam-pitaterana ve ianao hampiditra am-pahatoniana sy amin'ny toerana azo antoka?
Manana mpamatsy serivisy fanolorana atolotra anao ve ianao?
Mifanaraka amin'ny lalàna momba ny zona ao an-toerana ve ilay tranobe?
Misy sakana mivaingana eo amin'ny faritra miditra amin'ny daholobe sy ny faritra fidirana voafetra?
Inona avy ireo drafitra andavan'andro mpiasa ho an'ny fampitaovana?
Tombanana inona ny mpiasa no karama karama?
Manaiky ny fetra mandritra ny ora fiasana (6:00 maraina ka hatramin'ny 10:00 hariva)?
Ahoana no hiantohanao ny fikarakarana araka ny tokony ho izy ny vokatra, ao anatin'izany ny fanitsiana?
FANAMARIHANA: Ny fampahalalana toy ny tombontsoa amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny tombontsoan'ny fisotroan-dronono, sy ny sisa dia tokony ho tafiditra ao amin'ny Exhibit Q, Drafitry ny asa sy ny asa amin'ny asa, ary tsy ny Drafitra fampandehanana
Mampitsipaka ny fananana orinasa ve ny teti-bolanao? Raha izany no izy, very ny satan'ny fananana fitondra ara-tsosialy ve ianao?
Afaka miditra renivohitra fanampiny ve ianao raha ilaina?
Mahay famatsiam-bola ve ianao? Hatraiza?
Raha mangataka famatsiam-bola avy amin'ny departemantan'ny varotra sy ny sehatra ara-toekarena (DECO ianao) dia nampahafantarinao ny sampana araka ny notakiana tamin'ny Exhibit O?
Raha toa ka mangataka fahazoan-dàlana marobe ianao, manana famatsiam-bola ho an'ireo tranonkala atolotra rehetra ve ianao?
Manana fanentanana ara-bola ho avy manaporofo ny fahaizan'ny famatsiam-bola ho avy ve ianao?
Ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny mpangataka dia tokony hampiseho traikefa sy mari-pahaizana amin'ny fitantanana orinasa na traikefa amin'ny indostrian'ny rongony. Tafiditra ao anatin'izany ny fiantohana ny fiarovana sy ny fahamendrehana tsara indrindra amin'ny fanomezana sy fivarotana rongony [410 ILCS 705/15-30(c)(4)(A)]
Ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny mpangataka dia tokony hampiseho fahalalana momba ny karazana varotra na rongony isan-karazany ary mamaritra ny karazany sy ny habetsaky ny vokatra kasaina hamidy. Anisan'izany ny fanamafisana raha mikasa ny hivarotra kojakoja rongony na edibles ny fikambanana mpizara [410 ILCS 705/15-30(c)(4)(B)]
Ny fahalalana sy ny traikefa dia azo aseho amin'ny alàlan'ny traikefa amin'ny indostrian'ny fampitahana hafa izay maneho ny fahafahan'ny mpangataka miasa orinasa orinasa rongony. [410 ILCS 705/15-30(c)(4)(C)]
Hevitra fototra: Asehoy ny N.
Ity fizarana ity dia tonga amin'ny fihenjanana lehibe amin'ny rindranasa orinasa cannabis. Tian'ny fanjakana ny matihanina manana traikefa azo itokisana sy itokisana any Illinois hitarika ny tsenan'ny olon-dehibe any Illinois. Mazava ho azy fa ny tsena ara-pitsaboana any Illinois dia taona vitsy, ary ny tsenan-tsain'ny olon-dehibe dia volana vitsivitsy. Ka raha teoria, na iza misy manana dikany misy dikany ara-dalàna Ny traikefa cannabis dia avy amin'ny fanjakana iray (Kalifornia, Washington, Oregon ary Colorado manokana). Ny mpangataka dia te hampiseho ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny sehatra mitovy na mifandraika amin'izany, toy ny entana momba ny mpanjifa sy ny varotra.
Ireo mpangataka ihany koa dia afaka mampiseho fahombiazana amin'ny filaminana na indostria tena raikitra- ny sasany amin'ireo lehibe indrindra anarana tao cannabis, dia natolotry ny mpisolovava.
Ny IDFPR dia nanome torolàlana tena mahasoa amin'ity sehatra ity. Ao amin'ny fihodinana faharoa QA, ny IDFPR dia nilaza fa:
Tondro ho an'ny fampiratiana N (Fahalalana sy fanandramana ny tompon'andraikitra) ho an'ny fahalalana sy ny traikefa an'ity fampirantiana ity dia homena amin'ny alàlan'ny binary, midika izany fa ny mpangataka dia mahazo na 15 isa na 0 isa ho fampisehoana fampahalalana ny matavy ary na 15 isa na 0 isa ho fampisehoana traikefa sy fahaiza-manao amin'ny fitantanana orinasa na amin'ny traikefa amin'ny indostrian'ny cannabis.
Noho izany, na manana fahalalana rongony, na tsia. Ary na manana traikefa eo amin'ny fitantanana orinasa / cannabis indostria ianao, na tsia. Ireto misy zavatra vitsivitsy tokony hodinihina:
Ny mpitan-tsoratra dia miankina amin'ny tompon'andraikitra ambony ihany; ireo mpanolotsaina any ivelany tsy manisa
Moa ve izy ireo manana traikefa amin'ny indostria nampitaha ny IDFPR, toy ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola, farmasia, fivarotana lehibe, fivarotana sigara, trano fisakafoanana, na fivarotana
Moa ve ny tompon'andraikitra lehibe manana traikefa voan-tsakafo, na mpiasa, tompona, na mpanolo-tsaina ivelany?
Mahazo traikefa avo sy / na fahombiazana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ankapobeny ve ny tompon'andraikitra ambony?
Ny mpangataka dia mahafeno ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpangataka ara-tsosialy sosialy araka ny voatondro amin'ity lalàna ity. [410 ILCS 705/15-30(c)(5)]
Hevitra fototra: Fampisehoana P
Ara-drariny ny sata ara-tsosialy mivantana- na mahafeno fepetra ianao, na tsia. Satria ny satan'ny fitoviana ara-tsosialy dia mitentina 50 amin'ny isa 250 azo atao, sarotra izany, raha tsy azo atao ny mandresy raha tsy mendrika ny ho mpangataka ara-tsosialy. Ny sakana lehibe indrindra hatrehin'ireo mpangataka dia ny fanomezana antontan-taratasy mety. Tsy ampy ny milaza fotsiny hoe mipetraka any Illinois ianao, na voaheloka noho ny heloka rongony mendrika. Mila antontan-taratasy ianao hanaporofoana izany. Mba hahafeno fepetra ho mpangataka ara-tsosialy dia mila mametraka izao manaraka izao ianao:
Porofon'ny sata maha-mponin'i Illinois azy:
Ho an'ny orinasam-barotra, dia midika izany fa ny antontan-taratasy fampidirana ao amin'ny tranokala na lahatsoratra momba ny fandaminana
Ho an'ny isam-batan'olona dia mila roa amin'ireto ianao: fifanarahana fifanarahana fifanarahana, taratasy fananana, firaketana an-tsekoly, karatra fisoratana anarana amin'ny mpifidy, fahazoan-dàlana amin'ny mpamily any Illinois na kara-panondrom-pirenena, taratasy karama, volavolan-dalàna momba ny asa, na porofo mitoetra hafa. Mila mipetraka ao Illinois ianao mandritra ny 30 andro farafaharatsiny.
SY iray amin'ireto:
Porofo fa 51% ny tompona no nipetraka tao amin'ny faritra tsy nahomby (DIA) nandritra ny 5 tao anatin'ny 10 taona lasa izay (tamin'ny alàlan'ny fametrahana hetra, ny fanofaanana, ny fampindram-bola, ny karama andoavana karama, sns).
Porofo fa 51% amin'ny tompona no voasambotra, voampanga, na voampanga noho ny fandikan-dalàna nataon'ny CRTA
Ny porofo fa 51% an'ny tompona dia manana ray aman-dreny, mpiambina, manan-janaka, mpivady, miankina, na fianakavian'ny olona iray nosamborina, voampanga, na nanameloka ho fanitsakitsahana ny fandikan-dalàna mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna eo ambanin'ny CRTA.
Porofo fa mampiasa mpiasa 10 na mihoatra bebe kokoa ny mpangataka ary 51% + amin'ireo mpiasa ireo no mendrika ho mpangataka ara-tsosialy amin'ny antony # 1-3 etsy ambony
Mila porofo ianao fa ny mpiasa dia nanao asa manontolo andro hatramin'ny datin'ny fampiharana (ohatra, tatitra momba ny karama)
Ny mpangataka dia mety mamaritra ny drafitra hanomezana toeram-piasana azo antoka, mahasalama ary ara-toekarena ho an'ireo mpampiasa azy, anisan'izany, saingy tsy voafetra ho, ny fitsipi-pitondran-tena, tombontsoa ara-pahasalamana, tombontsoa amin'ny fanabeazana, tombontsoa fisotroan-dronono, fenitry ny karama velona, ​​ary miditra amin'ny asa. fanekena fandriampahalemana amin'ny mpiasa [410 ILCS 705/15-30(c)(6)]
Hevitra fototra: Aseho ny Q
Tahaka ny fiantohana ara-tsosialy, ny isa ho an'ny drafitry ny asa sy ny asa amin'ny mpiasa dia omena amin'ny alàlan'ny binoa-nahazoana isa dimy dimy ianao, na mahazo zero. Ny drafitrao dia tokony hanana ireto singa manaraka ireto:
Tombontsoa ara-pahasalamana omen'ny mpampiasa
Tombontsoa amin'ny fampianarana omen'ny mpampiasa
Ny tombontsoan'ny fisotroan-dronono omen'ny mpampiasa
Ny fanekena hanome karama velona
Io dia sanda noho ny karama farany ambany indrindra ao amin'ny faritra BLS izay ampiharinao
Fifanekena amin'ny fandriampahalemana amin'ny asa
Drafitra ny tombontsoan'ny mpiasa manokana sy voamarina, ankoatra ny tombontsoa voalaza etsy ambony
Ny mpangataka dia mety hampiseho drafi-pihetsika momba ny tontolo iainana hanamaivana ny dian-tongotra karbon, fiantraikany amin'ny tontolo iainana, ary filàna loharano ho an'ny fotoampitantanana, izay mety hampiditra, tsy misy fetrany, ny famonosana ny vokatra vita amin'ny cannabis. [410 ILCS 705/15-30(c)(7)]
Hevitra fototra: Fampisehoana R
Ny drafi-tontolo iainana dia manana fetra tsy misy pejy 5. Toy ny fampirantiana maro hafa dia azonao daholo ny hevitra rehetra, na tsy misy amin'izy ireo. Ny IDFPR dia nanome torolàlana kely kely momba ity olana ity, fa misy zavatra vitsivitsy mila dinihina momba ny drafitrasa momba ny tontolo iainana:
Manana drafitra angovo azo havaozina ve ianao?
Manana drafitra momba ny famerenam-bokatra vita amin'ny fivarotana cannabis ve ianao?
Moa ve hifanaraka amin'ny karazana fenitra maitso ny tranobenanao, toy ny fanamarinana LEED?
Ahoana ny fomba hampihenanao na hanafoana ny taratasy?
Hevitra fototra: Maneho S.
Ity angamba no fampirantiana mivantana indrindra. Mila porofo ampy fotsiny ianao amin'ny fivahinianana ao Illinois, mitovy amin'ny sata ara-tsosialy. Raha ny tena manokana dia mila roa amin'ireto manaraka ireto ianao:
Fifanarahana fifanarahana vita sonia izay misy ny anaran'ny mpangataka;
Taratasy fananan-tany izay misy ny anaran'ny mpangataka;
Karatra fisoratana anarana mifidy;
Fahazoan-dàlana amin'ny mpamily any Illinois, karatra Famantarana an'i Illinois, na olona iray ao Illinois izay manana karatra famantarana ny fahasembanana;
Volavolan-dalàna fakana vola; na
Ny porofo hafa momba ny trano fonenana na fampahalalana hafa ilaina amin'ny fametrahana trano fonenana raha omen'ny fitsipika.
Misy fantsona vitsivitsy tsy maintsy avela. Tadidio, tsy maintsy mandeha ho an'ny mponina ianao dimy amin'ireo folo farany taona. Ary raha mampiasa ny takelaka hetrao fotsiny ianao, dia mila manome ny volanao IL-1040 ianao. Amin'ny lafiny iray, raha mampiasa fahazoan-dàlana amin'ny mpamily an'i Illinois ianao, dia manome fatra-piraisana ao amin'ity taona ity ilay fahazoan-dàlana. Ka raha manana fahazoan-dàlana hambara ianao, dia lazao, mandritra ny dimy taona lasa, mahafeno fepetra ianao.
Ny mpangataka dia 51% na mihoatra voafehy ary fananan'ny olona na olona iray izay mahafeno ny fepetra omen'ny vazaha araka ny voafaritry ny Fizarana 45-57 ao amin'ny Code Procurement Illinois. [410 ILCS 705/15-30(c)(9)]
Ny Code d'expursement any Illinois dia manome famaritana midadasika ny "vazaha." Saika ny olona rehetra izay manao miaramila ao amin'ny tafika no tokony ho mendrika, ka mahafeno ny antontan-taratasy mety izany. Ny fizarana 45-57 ao amin'ny kaody fakan'i Illinois dia mamaritra ny "veterana" toy izao manaraka izao:
"Veteran" dia midika hoe olona izay (i) dia mpikambana ao amin'ny tafika amerikana na, raha olom-pirenenan'i Etazonia kosa dia mpikambana tao amin'ny tafika mitam-piadiana amerikana nandritra ny fifandonana tamin'i firenena vahiny ary (ii) niasa ambanin'ny iray na mihoatra amin'ireto fepetra manaraka ireto: (a) ny veterana dia nanompo farafahakeliny 6 volana; b) ilay veterana dia nanompo nandritra ny fotoana lava nisian'ny fifandrafiana na inona na inona ny halavan'ny fifamofoana; d) ny veterana dia navotsotra noho ny zava-tsarotra; na (d) navotsotra tamin'ny asany mavitrika ilay veterana satria kilema mifandraika amin'ny serivisy ary navotsotra tamina fepetra mendrika.
Amin'ny zavatra niainantsika dia ireo vazaha indrindra no mampiseho porofo amin'ny alàlan'ny famokarana ny DD214. Ny fahazoana DD214 dia mety maharitra, fa somary mora be izany dingana.
Drafitrasa iray samihafa (5 isa): izay ahitana fitantarana tsy mihoatra ny 2,500 XNUMX teny izay mametraka tanjona ny fahasamihafana eo amin'ny fananana, ny fitantanana, ny asa ary ny fifanarahana mba hahazoana antoka fa omena fitoviana ny mpandray anjara sy vondrona samihafa. [410 ILCS 705/15-30(c)(10)]
Hevitra fototra: Fampisehoana M
Ireo teboka dia omena ho an'ny Drafitra Fototra amin'ny alàlan'ny votoatin'ny binary- azonao ny 5 rehetra, na azonao ny 0. Ny fetin'ny Diversity dia manana fetra 2,500 10 teny (manodidina ny XNUMX takelaka, avo roa heny), ka ataovy azo antoka ny fampiasana ny vola feno! Ny zavatra iray lehibe indrindra tokony hotsaroana dia ny orinasa samihafa no tokony hisaina ny fokonolona eo an-toerana. Ny dikan'izany dia ny Drafitra Diversity any Chicago dia hafa noho ny Plan Diversity any Springfield, satria ireo tanàna roa ireo dia samy manana demografika samihafa. Amin'ny lafiny iray, raha ny indostrian'ny cannabis lahy manaintaina, mety ho 50% vehivavy ny fiarahamoninao ary tokony hampiseho izany ny drafitra Fitiavananao. Ireto misy lafin-javatra sasany tokony handinihana ny drafitra maha-samihafa anao:
Miresaka fitovian-jo amin'ny fananana tompony, fitantanana, asa ary fifanarahana ve ianao?
Miresaka momba ny sata ara-tsosialy ho an'ny tompona, tompon'andraikitra ary mpiasao (ohatra: "mirehareha isika fa orinasa vitsy an'isa")
Hahazo karamaina vitsy an'isa sy vehivavy (MWOBs ve ianao)?
Inona no politikanao amin'ny fitondran-tena manavakavaka? Moa ve ny politikan'ny fandeferana?
Raha mpangataka ekena ara-tsosialy ianao, ahoana no hinoanao fa mitazona ny sata ara-tsosialy ara-tsosialy ianao?
Ahoana no fomba hanehoan'ireo fomba fanao hividianana ny vondron'olona manodidina anao (ohatra, ny fitsidihana ireo toeram-piasana eo an-toerana, hiara-miasa amin'ny efitrano fivarotana isan-karazany)
TOKONY MBOLA MBOLA MBOLA TSY AZO TSARA
Tsotra dia misy betsaka izay miditra amin'ny famerenam-bokatra momba ny dispensary cannabis. Izany no antony mahatonga ny mpangataka faran'izay tena be pitsiny sy manambola aza tokony hieritreritra ny fitazonana mpanolo-tsaina hitarika azy ireo amin'ny alàlan'ny dingana. Mandritra izany fotoana izany, ny rindranasa dia ho avy amin'ny alàlan'ny fanoratana, amin'ny alàlan'ny fitsipi-pandrindrana novolavolain'ny olombelona. Ary midika izany fa hisy ny lesoka, tsy fifanarahana, ary olana hafa. Ampiasao io torolàlana io mba hamaritana raha tena nandefa ny rindranasa tsara indrindra azonao atao ianao. Ary raha nanao (ary nahafinaritra izany!), Dia mety ho tonga ny fotoana hevero ny hanao hetsika matanjaka amin'ny Fanjakana.